Date: August 24, 2013Author: Oromedia 3 Comments
BREAKING NEWS(Oromedia, 24 Hagayya 2013) Manni hidhaa Qaallittii fi Hospitaalli Minilik reeffa ilmaan Oromoo waggaa waggaan oomishuu isaanii itti fufanii jiru.
Previous Previous post: Guyyaan SBO Kabajame
Next Next post: OLF Statement on the death of Engineer Tesfahun Chemeda who died in the notorious TPLF/EPRDF prison of Qaallittii yesterday.
3 thoughts on “Enginar Tasfahuun Camadaa mana Hidhaa keessatti ajjeefame; reeffa isaa argachuuf maatiin kadhachaa jira.”
A Call for Oromumma at this Juncture of Condolence
Tuujii Walaabuu. says:
Yaamicha nuti miseensonni ABO fi Miseensotni WBO-Godina Kibba Bahaa Miseensota ABO-fi Sab-Boontota Oromoof dhiheesinerrati yaada Gantuun sabaa kan Lencho ofiin jedhu barreese waan argineef deebii gabaabduu kana kennuufiif dirqamne.
Gottako seenaan yoomiyu sin-daggattu.